योग किन आवश्यक छ ? - स्वास्थ्य - प्रकाशितः असार ७, २०७७ - नारी
योग किन आवश्यक छ ?
सन्दर्भः अन्तर्राष्ट्रिय योगा दिवस
असार ७, २०७७ आज अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस । विभिन्न कार्यक्रम गरेर संसारभर यो दिवस मनाइन्छ । अहिले धेरैको दैनिकी व्यस्त छ । जसकारण मानिसमा मानसिक तथा शारीरिक समस्या हुन सक्छ । अस्वस्थ जीवनशैली र खानपानका कारण कम उमेरमै मधुमेह, मोटोपना जस्ता समस्या देखिन सक्छ । स्वस्थ जीवनका लागि योग अपरिहार्य भएको योग प्रशिक्षक निलिमा काफ्ले बताउँछिन् । स्वस्थ भएमा मात्र जीवन सक्षम हुने धारणा निलिमाको छ ।
बुटवलकी गौरी कार्की १० वर्षदेखि नियमित रुपमा योग गर्दै आएकी छिन् । योग उनको जीवनको अभिन्न अंग जस्तै भइसक्यो । नियमित रुपमा योग नगरेमा दिनभर के छुटेको जस्तो महसुस उनलाई हुन्छ । योगले शारीरिक तथा मानसिक रुपमा स्वस्थ रहेको अनुभव उनको छ ।
योग भनेको जोड हो । त्यसैले यसलाई योगासन भनिन्छ । निलिमाका अनुसार एउटा आसनमा आनन्दले बसेर अभ्यास गर्नु नै योगाभ्यास हो । योगाभ्यास तीन चरणका हुन्छन्–
पहिलो, योगका विभिन्न आसनको अभ्यास गरिन्छ । दोस्रोमा प्राणायाम पर्छ । यसमा एउटा नाकले श्वास लिने र केही समयपछि अर्को नाकले फाल्ने गरिन्छ । तेस्रोमा मेडिटेसन (ध्यान) पर्छ । १५ मिनेट चुपचाप रही पलेँटी कसेर चोर र बूढी औंला जोडेर ध्यान मुद्रामा आनन्दले बस्ने गरिन्छ । यसले मन शान्त हुन्छ ।
आजकल कतिपयले योगको दुई–चारवटा आसन झिकेर व्यायाममा प्रयोग गरेका छन् । निलिमाका अनुसार योग बिस्तारै गरिन्छ भने व्यायाम फटाफट गरिन्छ । त्यसैले व्यायाम गर्दा पसिना आउँछ भने योग गर्दा पसिना आउँदैन ।
प्रस्तुतीः उपासना घिमिरे